Kylian Mbappe Oo Shaaciyey Sabab Uu Uga Tegayo PSG & Guud Ahaan Waddanka Faransiiska | Laacibnet.net
HomePSGKylian Mbappe Oo Shaaciyey Sabab Uu Uga Tegayo PSG & Guud Ahaan Waddanka Faransiiska
Kylian Mbappe Oo Shaaciyey Sabab Uu Uga Tegayo PSG & Guud Ahaan Waddanka Faransiiska
April 1, 2021 Abdiwahab Ahmed
Weeraryahanka reer France ee KYlian Mbappe ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa xilli uu heshiiskiisa kooxda PSG kusii siqayo inuu dhamaado.
Laacibkan ayaa ka warwareegaya in uu ogolaado heshiis cusub oo uu PSG u saxeexo iyadoo heshiiskiisii hore ee uu kooxda kula joogayna uu dhamaadkiisa ka hadhsan yahay sannad kaliya.
Kooxaha Real Madrid, Liverpool iyo Barcelona ayaa si dhow ula socda xaaladda Kylian Mbappe, waxaase ugu mudan Real oo uu tababare Zidane ka shaqaynayo sidii uu ugu qancin lahaa in aanu heshiis cusub saxeexin, si PSG ay ugu qasbanaato in ay iibiso xagaagan haddii kalena uu sannad kaddib si bilaash ah kaga yimaaddo.
Si kastaba, Mbappe ayaa mar kale ka hadlay mustaqbalkiisa PSG iyo sababta ay heshiis u gaadhi la’ yihiin, waxaana isagoo waraysi siinayay telefishanka RTL kaddib guushii uu waddankiisa France xalay kasoo hooyey Bosnia-Herzegovina uu yidhi: “Haddii horumar laga samayn lahaa (heshiiska), mar hore ayaan ka hadli lahaa. Dabcan, waan ka hadli doonaa marka aan go’aan gaadho.”
Warbaahinta ayuu Mbappe ku eedeeyey in ay dhalleecayn ba’an la daba socdaan, waxaanu yidhi: “Dabcan dhalleecaynta warbaahinta waan ka daalay, gaar ahaan marka aad u ciyaarayso koox waddankaaga ka dhisan ee aad wax walba siiso qarankaaga. Muddo kaddib waad daalaysaa (dhalleecaynta warbaahinta waad ka daalaysaa).
“Ciyaartoyda dibedda ka ciyaarta way ka duwan yihiin, halkanna waxay ugu soo laabtaan inay u ciyaaraan xulka qaranka, anigu se mar walba waan dhex joogaa, in badanna way iga hadlaan. Waa arrin aan kaga duwanahay ciyaartoyda kale laakiin waxaan ogahay in ay sidaas uun sii ahaan doonto marka aan u saxeexo PSG. waynu arki doonaa.”
Kylian Mbappe oo ah ciyaartoyga labaad ee ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta, isla markaana ay PSG sannadkii 2017kii kaga soo iibsatay Monaco lacag dhamayd €145 milyan oo Euro oo lagu darayay €35 milyan oo kale oo ku xidhnaa bandhiggiisa, ayaa hadda dhamaad ku dhow yahay qandaraaskii uu waqtigaa saxeexay.